:Bọchị: Disemba 16, 2019
Ebumnuche Mmepụta Igwe ntụzịaka ikuku ntụgharị maka ikuku
Emebere Ihe Ntughari nke YHT TCDD Taşımacılık A.Ş. General Directorate nke Yht Direkpụrụ Directorate 2019/595431 GCC ihe ruru 369.754,00 TL YHT Isi Mmezi Mmezi Ikuku Igwe ikuku. [More ...]
Ntinye ohuru maka Ogige Konya YHT
Nleta ohuru maka Ọdụ Konya; A na-eme atụmatụ 2017 imeghe na October, na 2016 kwekọrịtara site na TCDD na 4734. [More ...]
Marmaray Machinist si İŞKUR
Ụgbọ njem na ihe ndị mepere emepe Cahit Turhan, Gebze-Halkalı mara ọkwa na a na-eweghachi 245 site na İŞKUR. SözcüDabere na akụkọ banyere Ali Ekber Ertürk; Ọzụzụ maka ọrụ ebe a na-arụ ọrụ [More ...]
Ihe ngosi Ugwu Kemal Demirel
Ngosi Razọ ilgbọ Egwuregwu Egwu bybụ site n’aka Kemal Demirel; Kemal Demirel bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị mbụ na-abata n'uche mgbe a bịara n'ịzụ ọzụzụ na Bursa. Demirel, onye bụ onye nnọchi anya CHP Bursa n'oge 2, nyere onwe ya uri na egwu mgbe ọrụ ụgbọ oloko ya gachara obodo a. Ugbu a, ọ dị iche [More ...]
TCDD ga-eme Bursa ka ọ bụrụ ebe mgbatị ahụ maka ebufe ibu
… Na mkparịta ụka, ndị na-ahụ maka ọrụ na-aga n'ihu na-ekwusi ike maka ụzọ ụgbọ elu dị elu maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè Bursa, mana enwere ụzọ ụgbọ elu dị elu na ngalaba ọrụ ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a ga-enwe ahịrị n'otu ụgbọ okporo ígwè maka ọrụ ndị njem na nke ụgbọ oloko. [More ...]
FedEx Express iji nye ọrụ na Company na Turkey Faster amalite
Ahịa na Turkey ekele ọzọ kpọmkwem flights ga nwere ohere ahia gafee Europe na gburugburu ụwa. A FedEx Corp. (NYSE: FDX) na FedEx, ụlọ ọrụ na - ebugharị akachasị mbụ n'ụwa. [More ...]
Zụlite Otu Zụlitere Na Pristina
Pristina dün Adem Jashari ”n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa ụnyaahụ, n'ihe dị ka elekere asatọ nke abalị, ihe ọghọm mere n'ụgbọ okporo ígwè ahụ kụrụ ụgbọ ala ahụ. Otu onye merụrụ ahụ n'ihi ihe ọghọm a. Ihe ọghọm nke Avigbọ elu na Nnyocha [More ...]
A mbụ na Turkey! .. Mediterranean Coast Ụzọ Alụta Smart
A mbụ! .. Mediterranean Ala gbara osimiri okirikiri Highway na Turkey Alụta Smart; Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan kwupụtara na emechara akụrụngwa fiber optic na kilomita 505 nke Oké Osimiri Mediterenian, nke a malitere dị ka ngwa eji achọ ihe eji arụ ọrụ. [More ...]
Balıkesir Traffic 53 nyere aka site na sistemụ Smart Intersection
N'ihi ọrụ ndị na-ebuwanye ibu n'okporo ụzọ rụrụ site na mmeghe ụzọ na ọdụ ụgbọ okporo, Governmentlọ Gọọmentị na Clover Junction na nkuzi nke Balıkesir Metropolitan Mayor Yücel Yılmaz; Dabere na data enwetara na sistemụ amamihe dị na ya, pasent nke okporo ụzọ na Balıkesir [More ...]
Nzụta ụgbọ nke Antalya nke Atọ na Prozụta Asambodo Maka nkwuputa ahụ, Antalya Metropolitan Department of Transportation Plan and Rail System nwere ọnụ ahịa ihe ruru. [More ...]
Achọtara arịrịọ Ebe E Si Nweta maka Ego Mgbazi EGO
Arịrịọ Ebe E Si Nweta maka Ego ụgbọ EGO; Emere ikpeazụ nke nzukọ nke ọnwa Disemba nke Ankara Metropolitan Municipality Council n'okpuru ọkwa Onye isi ala Mansur Yavaş. Assemblylọ Mgbakọ obodo ukwu na nnukwu mmasị ụmụ amaala [More ...]
MANULAŞ A.Ş., onye enyemaka nke Manisa Metropolitan Obodo. Manisa Old Garage Open Auto Market nke sitere na ya. N'isi mmalite ụbọchị mbụ, ọtụtụ narị ndị nwere mmụọ ụgbọ ala na-enugharị na ahịa akpaaka. [More ...]
Akwụ ụgwọ ụgbọ njem Seçer'den maka ndị na-eto eto nwere 1 Lira Good News
Onye isi obodo Mersin Metropolitan Mayor Vahap Seçer zutere ụmụ akwụkwọ na-amụ na Mahadum Mersin, Mahadum Tarsus, Mahadum Toros na Mahadum Çağ. Họrọ, njem ụgbọ ala nye ndị na-eto eto dị ka 1 lira [More ...]
Sakarya na-ewere Ọhụrụ na Oge Ọhụrụ na Moderngbọ njem
Onye isi obodo Ekrem Yüce kwuru na ha ga-etolite ụzọ ọzọ site na Sebahattin Zaim Boulevard na mpaghara Serdivan wee sị: [More ...]